Fitakian-ketra – Mandeha ny fifampiraharahana avo lenta momba ny Tiko - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fitakian-ketra – Mandeha ny fifampiraharahana avo lenta momba ny Tiko
Efa tonga tao Antsirabe, saika hanatanteraka ilay didy hanaovana fanagiazana ny orinasa Tiko ao Andranomanelatra sy Mahafaly omaly ny
vadintany avy amin’ny foibem-pitondrana anka-pobeny misahana ny hetra (Dgi), saingy voatery nahemotra anio indray izany. Fantatra mantsy fa misy ny fihaonana sy dinika ataon’ireo minisitera maromaro voakasik’ity raharaha ity, omaly.
Teo anatrehan’ny sekretera jeneralin’ny Faritra Vakinankaratra ny vadintanin’ny Dgi sy ny avy amin’ny Tiko no nifampiresaka omaly.
« Raha tsy misy baiko azo hatramin’ny rahampitso maraina (ndlr : anio) dia hiroso amin’ny fanagiazana izahay », hoy ny Me Mamy Andrianoro Lucien, vadintany.
Nilaza izy fa tsy mbola fanaovana varotra ampahibemaso no hatao mandritra izany fa fijerena ireo entana rehetra ao amin’ny orinasa Tiko ihany. »Baiko avy any amin’ny minisiteran’ny Vola, 10 hatramin’ny 15 andro aorian’ny fanagiazana no ahafahana miroso na tsia amin’ny fanaovana varotra ampahibemaso ireo entana giazana », hoy ihany ny fanazavany.
Toy ny mahazatra dia efa vory lanona teny amin’ny orinasa Tiko Andranomanelatra ireo mpiasa, omaly. Nilaza ny tsy hitazam-potsiny izay hafitsok’ireo mpanatanteraka didy izy ireo koa dia andrasana izay hiseho amin’ity andro anio ity.
Hetra, Tiko, Mpanoratra Rijakely, 06.06.2012, 08:55	FIARAHAMONINA